Vanhu Chaizvoizvo Vanofanirwa Kuzvibata Nani paSocial Media | Martech Zone
Pamusangano wapfuura, ndanga ndichiita hurukuro nevamwe vatungamiriri venhau nezvenzvimbo yemamiriro ekunze isina kunaka inokura pasocial media. Hazvina kunyanya nezve kupatsanurwa kwezvematongerwo enyika, kuri pachena, asi nezve kutsamwa kwehasha dzinopomera pese panomuka nharo.
Ini ndakashandisa iyo term kuputsika nekuti ndizvo zvatinoona. Hatichambomira kutsvagisa nyaya, kumirira chokwadi, kana kuongorora mamiriro ezvinhu acho. Iko hakuna kuita kunonzwisisika, kungori kwepamoyo. Ini handigone kubatsira asi kufungidzira yanhasi yemasocial media chikuva senzvimbo yeColosseum ine mhere kubva kuvanhu vazhinji nezvigunwe pasi. Mumwe nemumwe anoshuvira chinangwa chehasha dzavo abvarurwe nekuparadzwa.
Kusvetukira mukutsika-tsika kwevanhu kuri nyore sezvo tisingazive munhu wacho, kana vanhu vari kumashure kwechiratidzo, kana kuremekedza vakuru vehurumende vakavhoterwa muhofisi nevavakidzani vedu. Parizvino, hapana kugadzirisa kukuvadzwa kwakaitwa neboka… zvisinei nekuti munhu anga achifanirwa nazvo here kana kuti kwete.
Mumwe munhu (ndinoshuva dai ndaigona kuyeuka kuti ndiani) akakurudzira kuti ndiverenge Saka Wakave Unonyadziswa, naJon Ronson. Ndakatenga bhuku iro nguva iyoyo uye ndanga ndarimirira ini pandakadzoka kubva parwendo. Munyori anoenda nemakumi gumi nemaviri kana nyaya pamusoro pevanhu vakanyadziswa pachena, mukati nekunze kwenzanga yemagariro, uye mhedzisiro inogara. Mhedzisiro yekunyadzisa yakanaka kusviba, nevanhu vakahwanda kwemakore uye kunyangwe mashoma ayo akangopedza hupenyu hwavo.
Isu Hatisi Nani
Ko kana nyika yaiziva zvakanyanya nezvako? Ndechipi chinhu chakaipisisa chawakambotaura kumwana wako? Ndeipi pfungwa yaityisa yawaive nayo pamusoro pemumwe wako? Ndechipi chaive chakanyanya kuseka-kara joke iwe wawakamboseka kana kuudzwa?
Kufanana neni, iwe pamwe unotenda iro boka raisazombowana kuoneka mune izvo zvinhu nezve iwe. Vanhu tese tine kukanganisa, uye vazhinji vedu tinorarama tichidemba uye tichirwadziwa nezviito zvatakaita kune vamwe. Musiyano uripo ndewekuti hatisi tese takatarisana nekunyadziswa neruzhinji nezvezvinhu zvinotyisa zvatakaita. Ndatenda zvangu.
Kana isu vakanga yakafumurwa, tinokumbira ruregerero uye tinoratidza vanhu marongero atakaita nehupenyu hwedu. Dambudziko nderekuti boka raenda kare kana tasvetukira maikorofoni. Nguva yapera, hupenyu hwedu hwatsikwa. Uye kutsikwa nevanhu havasisina kana kushomeka kutadza kupfuura zvatiri isu.
Bvisai shungu dzose, hasha nokutsamwa, kupopota namakuhwa pamwe chete nokuvenga kwose. Muitirane moyo munyoro uye munzwirane tsitsi, muchikanganwirana, sezvamakakanganwirwa muna Kristu Mwari. VaEfeso 4: 31-32
Kana tichizoramba tichidzika nemugwagwa uyu, isu tichafanirwa kuve vanhu vari nani. Tichafanirwa kutsvaga kuregererana nekukurumidza isu patinotsvaga kuparadza mumwe nemumwe. Vanhu havazi vebhinari, uye isu hatifanire kutongwa senge akanaka kana akaipa. Kune vanhu vakanaka vanokanganisa. Kune vanhu vakaipa vanoshandura hupenyu hwavo uye vova vanhu vanoshamisa. Tinofanira kudzidza kuyera hunhu hwakanaka muvanhu.
Imwe nzira inyika inotyisa uko kutsikwa kwakazara uye isu tese tinomuka tichihwanda, kunyepa, kana kurohwa. Nyika yatisingashinga kutaura zvatinofunga, kukurukura zviitiko zvine nharo, kana kuratidza zvatinotenda. Ini handidi kuti vana vangu vagare munyika yakadai.
Kutenda kuna Jon Ronson nekugovana iri rakakosha bhuku.
Kuzivisa: Ndiri kushandisa yangu Amazon yakabatana chinongedzo mune ino posvo.
Tags: affiliatehashakupopotanetsitsikushungurudzikaVaEfesoruregererojon monsoonmutsautsinyebhuku rekushambadzirahashakunyadziswakunyadzisakucherakusuwakuputsika